Myanmar: Hafatra Miafina Ho an’ny Fitondrana Miaramila Nivoaka Tao Amin’ny Gazety MyanmarTimes · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Jona 2017 3:55 GMT
Vakio amin'ny teny Português, বাংলা, Deutsch, Français, 繁體中文, 简体中文, 日本語, English
Bilaogera N3 nilaza fa navoaka toy ny dokambarotry ny sampana misahana ny fitetezam-paritra ny hafatra ary nosoratana mivadika. Ny ampahany voalohany amin'ny hafatra miafina dia mivaky hoe “Fahalalahana” ary ampahany hafa mivaky hoe “Mpamono olona Than Shwe”.
Nikaroka izay niavian'ny dokambarotra i May11 mba ahafantatra ny hevitra ambadiky ny hafatra ary nahita fa:
Ny dokambarotra izay tahaka ny mampiroborobo ny fizahantany ao Burma ho an'ny Skandinavianina dia nahitana hafatra miafina ho an'ny mpanongam-panjakana Birmana. Ny tarehintsoratra voalohany isaky ny teny ao amin'ny tononkalo dia ahitana teny hoe “fahafahana” sy ny anaran'ny Biraon'ny Sampana misahana ny Fitetezam-paritra Islandika “Mpamono Olona Than Shwe” vakiana mivadika
Ny Jeneraly Than Shwe no lehiben'ny fitondrana miaramila ao Myanmar.
Mandritra izany, Nyein Chan Yar nisaotra ny vondrona izay nametraka izany dokambarotra izany tao amin'ny gazety.
Napetraky ny vondrona Danoà Surrend ny dokambarotra. Efa nanao tahaka izany tao Iran.ny Surrend taloha.